स्वावलम्बन विकास केन्द्रको वार्षिकोत्सव सम्पन्न
काठमाडौं (अस) । स्वावलम्बन विकास केन्द्रको २८औं वार्षिकोत्सव तथा लघु उद्यमशीलता विकास पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न भएको छ । समारोहमा लघु उद्यमशीलता विकास पुरस्कारबाट यस वर्ष काभ्रको मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था रू १ लाख नगदसहित पुरस्कृत भयो । समारोहमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्र...
ग्लोबलको क्रेडिट कार्ड पाउन अनलाइनबाट आवेदन
काठमाडौं (अस) । ग्लोबल आईएमई बैंकले क्रेडिट कार्डको दरखास्त फारम अनलाइन प्रणालीमार्फत भर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकले आफ्नो क्रेडिट सीमा बुझ्न, कार्ड कसरी बनाउने भन्ने जानकारी पाउन र कार्डका लागि आवेदन दिन अनलाइनबाट नै गर्न सक्ने बैंकको भनाइ छ । क्रेडिट कार्ड लिन इच्छुक ग्राहकले ग्लोबल आईएमई...
एनएमबि बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्ने प्रस्ताव विशेष सभाबाट पारित
साउन २८, काठमाडौं । एनएमबि बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित गरेको छ । एनएमबि बैंकको मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित विशेष साधारणसभाले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले गाभ्ने/गाभिने र सम्पत्ति दायित्वको मूल्यांकन गरी ओम डेभलपमेन्ट बैंकको १०० कित्ता बराबर एनएमबि बैंकको ७६ कि...
सानिमा क्यापिटलको ठेगाना परिवर्तन
साउन २८, काठमाडौं (अस) । सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले ठेगाना परिवर्तन गरेको छ । कम्पनी मंगलवारदेखि पुतलीसडक स्थित शेयर मार्केट्स कमर्शियल कम्प्लेक्सको दोस्रो तल्लामा स्थानान्तरण भएको छ । यसअघि कम्पनीले नारायणचौर, नक्सालबाट सेवा दिँदै आएको थियो ।
एनआईसी एशिया र भन्सार विभाग कञ्चनपुरबीच सम्झौता
काठमाडौं (अस) । एनआईसी एशिया बैंक र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभागबीच कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय परिसरमा बैंकको विस्तारित काउन्टर स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीमा बैंकको काउन्टर रहनेछ, जसबाट भन्सार कार्यालयको कारोबारका साथ भन्सारमा आउन...
पोखराको बूढीबजारमा सनराइज बैंक
काठमाडौं (अस) । सनराइज बैंकले कास्कीको पोखरा महानगरपालिकास्थित बूढीबजारमा १२०औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमवार पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी र सन्राइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले संयुक्त रूपमा शाखा कार्यालय तथा एटीएमको उद्घाटन गरेका थिए । यससँगै बैंकका देशभर १२०...
मुक्तिनाथका ग्राहकलाई सञ्जीवनी र विराट आँखा हस्पिटलमा छ्र्रूट
काठमाडौं (अस) । मुक्तिनाथ विकास बैंकले सोमवार विराटनगरस्थित सञ्जीवनी हस्पिटल तथा आईभीएफ सेन्टर प्रालिसँग छूट सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा सञ्जीवनी हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक विनायक पन्त र मुक्तिनाथ विकास बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समीरशेखर वज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । साथै, वि...
काठमाडौं (अस) । एनआईसी एशिया बैंक र उपाय सर्भिसेस लिमिटेडबीच सोमवार उपाय सर्भिसेसले प्रदान गर्ने व्यावसायिक परामर्श सेवामा छूटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार उपाय सर्भिसेसले प्रदान गर्ने सेवामा उक्त बैंकका ग्राहकले डिजिटल च्यानलमार्फत भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत छूट पाउनेछन् । सम्झौतामा बैंकका...
अशोक लेल्यान्ड र कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौं (अस) अशोक लेल्यान्ड र महेन्द्रनगरमा प्रधान कार्यालय रहेको कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकबीच कर्जा सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिरुराम जैसी र आईएमई मोटर्सका भाइस प्रेसिडेन्ट इमरान ए. खानले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालका लागि आईएमई ग्रूप अशोक लेल्यान्डको आधिकारिक वितरक हो...
शिक्षा सम्मेलनलाई जनता बैंकको सहयोग
काठमाडौं (अस) । जनता बैंकले ‘गुणस्तरीय शिक्षासम्बन्धी दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ लाई रू. २ लाख सहयोग गरेको छ । बैंकले रातो बंगला फाउन्डेशनद्वारा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आगामी भदौ ७ देखि ९ गते सञ्चालन गर्ने उक्त सम्मेलनका लागि सहयोग गरेको जानकारी दिएको छ ।...